Ukuziphatha okungamukeleki: IFrance ikhumbula izithunywa zayo eziya e-US nase-Australia
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » France » Ukuziphatha okungamukeleki: IFrance ikhumbula izithunywa zayo eziya e-US nase-Australia
I-5 min ifunde
Ukushiya iphrojekthi yasolwandle iCanberra neParis ababevumelene ngayo ngo-2016 kwenza isimilo esingamukeleki phakathi kwababambisene nabalingani, imiphumela yayo ethinta umqondo esinawo wezivumelwano zethu, ukusebenzisana kwethu nokubaluleka kwe-Indo-Pacific ye-Europe , 'Kusho uNgqongqoshe Wezangaphandle waseFrance.
Uhulumeni waseFrance udonsa amanxusa akhe eMelika nase-Australia.
IFrance ibiza ukukhishwa kwayo ebudlelwaneni obusha be-AUKUS kanye nokulahleka kwenkontileka enkulu yangaphansi kolwandle njengokugwazwa emhlane.
UMongameli waseFrance ukhansele umcimbi omkhulukazi e-Embassy yaseFrance eWashington, DC ehlelelwe iminyaka engama-240 yempi yomlando yasolwandle.
UNgqongqoshe Wezangaphandle waseFrance uJean-Yves Le Drian umemezele namuhla ukuthi iFrance ikhumbule amanxusa ayo avela e-United States nase-Australia mayelana 'nokuziphatha okungamukeleki' eWashington, London naseCanberra ekwenzeni isivumelwano semikhumbi yenyukliya esiholele ekususweni kwesivumelwano esikhulu saseFrance inkontileka yasolwandle ne-Australia.
Ngokusho kukaLe Drian, isinqumo sokubuyisa izithunywa sasifaneleke ngokuphelele 'ngamandla adlulele' esimemezelo sangoSepthemba 15 esenziwa yi-Australia, USA kanye ne-UK.
"Ngokwesicelo sikaMongameli weRiphabhulikhi, nginqume ukuthi ngibuyele eParis masinyane ukuze kuboniswane namanxusa ethu amabili e-United States nase-Australia," kusho uLe Drian.
UMengameli waseMelika uJoe Biden, uNdunankulu wase-Australia uScott Morrison nozakwabo waseBrithani uBoris Johnson bamemezele lolu hlelo 'lwe-AUKUS' emcimbini obhekwe ngabathathu ngoLwesithathu ntambama. Umgogodla walesi sivumelwano esisha "semibuso yentando yeningi yasolwandle" ngumklamo wezinyanga eziyi-18 wokunikeza iCanberra ngemikhumbi-ngwenya esebenzisa amandla enuzi kodwa evamile. Lokhu kuzokwenza i-Australia izwe lesikhombisa kuphela emhlabeni ukuthi lisebenzise imikhumbi enjalo - futhi ukuphela kwempahla engenazo izikhali zenuzi.
Uhulumeni ka France kubikwa ukuthi uthole ngalesi sivumelwano kusuka emibikweni yabezindaba, hhayi eWashington noma eCanberra ngqo, yize izikhulu zase-Australia ziphikelela ukuthi zikwenze kwacaca “kozakwabo” ukuthi isivumelwano saseFrance-Australia singahoxiswa.
UNgqongqoshe Wezempi KaLe Drian noFullrence Parly ukhiphe isitatimende esibuhlungu ephendula ukwambulwa kwe-AUKUS, kwathi uNgqongqoshe wezangaPhandle wakubiza ngokuthi 'ukugwaza emhlane.'
UMongameli waseFrance u-Emmanuel Macron ukhansele umcimbi omkhulukazi kwinxusa laseFrance eWashington, obehlelelwe umgubho weminyaka engama-240 yempi yasolwandle eyasiza ukunqoba impi yenkululeko yaseMelika.
I-France ayizange ikhishwe nje kuphela kumfelandawonye omusha, kodwa yalahlekelwa yinkontileka yokuhlinzeka ngemikhumbi-ngwenya esebenza ngokujwayelekile e-Australia. Uhulumeni waseFrance unengxenye enkulu ku-Naval Group, esebenze kule nkontileka, enenani elifinyelela ku-$66 billion.
Australia Boris Johnson Canberra France London Paris Scott Morrison I-united states Washington, DC
Ukuhamba ngezebhizinisi kubonakala njengenzuzo ku-post-COVID US
IMisoramu Entsha: Indawo Ephephile Yezokuvakasha
Ukuhlolwa Kuqediwe Ukwelapha I-Radiation Dermatitis e...
UQantas uthanda i-Airbus ngezindiza ezintsha ezingami eziya eLondon...
Usuku Lomhlaba Lwezilwandle E-Southern California Luxury...
I-Vista ithola inkundla yezinsizakalo zezindiza ezizimele...
Ukuhanjiswa Okusha Kwezidakamizwa Zokwelashwa Kokuntula Insimbi
I-CEO ye-Ryanair: Izindiza zizokhuphuka kuleli hlobo
I-Patient Lateral Transfer Market kulindeleke ukuthi ifinyelele ...
IATA: Ukukhula kwezimpahla zomoya kwehla ijubane, kodwa kuyaqhubeka
Umbusi Wesifunda sase-Bayelsa kwezokuvakasha Uphakamisa Amanzi Okuphulukisa...
I-Emulsion Polymers Usayizi Wemakethe, Yabelana, Ukukhula | Bika...
IFlorida isabisa ngokuphuca iDisney World eyakhe ...
I-Luxury Yachting echibini laseMichigan
Ungqongqoshe uBartlett Ukhalela Ukudlula Kwabath Fountain GM...
I-Blue Amber Zanzibar Resort: Iqhawe elisha le-Afrika...
I-Brand Identity Entsha Yethulwe Ngezisusa kanye...
I-iPod ende: I-Apple idonsa ipulaki kudivayisi yayo yesithonjana
Isiguli Sokuqala Sithathwe Ocwaningweni Lomdlavuza Wezinso
ISouth African Airways yengeze umthamo ngemuva kokuthi iComair...
Ukusebenzisana okusha kwesilingo somtholampilo sokwelashwa kwe...
Angaphezu kuka-30,000 amakamelo amahhotela athuthukiswayo...
Amanani amahhotela aseHawaii, ukuhlala kanye nemali engenayo akhuphuka...
Ukwelapha ngofuzo lokuqala emhlabeni lwe-knee osteoarthritis
Ihhotela Elinezibophezelo e-Costa Rica Likhuthaza nge-WTM Entsha...
I-Empire State Building ihlonipha i-Notorious BIG..
I-Endoscopy Video Systems Ukuhlaziywa Kwemakethe, Okuthrendayo Kwakamuva...
Idatha Entsha Ye-Antibody Efudumele Ye-Autoimmune Hemolytic Anemia
Umcwaningi waseColombia Ubulawe Kabuhlungu Indlovu e...
I-Canada Izama Ukunciphisa Isikhathi Sokulinda Isikhumulo Sezindiza
I-Disney World ibanjwe yiDeSantis World eFlorida
IChorus Aviation iqeda ukutholwa kwayo kweFalko...
UHarry Johnson ube ngumhleli wesabelo se- eTurboNews iminyaka engaphezu kwengu-20. Uhlala e-Honolulu, eHawaii, futhi udabuka eYurophu. Uyakujabulela ukubhala nokubika izindaba.
Amatekisi Omoya - gwema isiminyaminya ezindaweni ezimatasatasa izivakashi
Ithempeli laseBuddhanilkantha liyigugu elifihliwe laseNepal. Jabulela ukuvakasha kwe-eTN Correspondence Scott MacLennan e-Nepal. I-Break News Show namuhla noDkt. Peter Tarlow kanye noJuergen Steinmetz iphenya amatekisi ezindiza. Kungani ushayela phakathi kwethrafikhi eningi emadolobheni ezivakashi amatasa, uma ungathatha itekisi yomoya. Lokhu okusha […]
I-SKAL International Club ejabulisa kakhulu Emhlabeni yi-Helsinki, e-Finland
I-Breaking News Show ngomhla ka-22/23 Meyi 2022: Ohlelweni lwezindaba eziphambili namuhla hlangana noMongameli we-SKAL International Helsinki u-Karl Halonen echaza kabanzi mayelana Nendawo Yezokuvakasha yase-Finland. Le ngxoxo iza ngesikhathi lapho iFinland yayifuna ukujoyina i-NATO phakathi nempi yaseRussia-Ukraine. Lokhu kusho izinguquko ezinkulu embonini yezokuvakasha nezokuvakasha eFinland. […]